မဘသ အဖွဲ့ရဲ့ သာသနာတော် နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘက်မလိုက်ပဲ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှမကြည့်ပဲ အရေးယူဆောင်ရွက်တာကို ဘုရားကျွန်တော်မျိုး အထူးတလည်ထောက်ခံအားပေးပါတယ် ဆရာတော်ဘုရားတို့ … | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မင်းတို့မေမေလေး နှာစေးယုံတင်မက မျက်လုံးပါ ဝါးတားတားဖြစ်နေ သလိုပေါ့လေ
ရမည်းသင်းမြို့ ဗ.မ.က ရပ်ကွက်ရှိ ဖျက်ဆီးခံရသောကန်ကြီးဗလီသည် အင်းဝပုဂံခေတ် ကပင်တည်ရှိခဲ့သော သမိုင်းမှတ်တမ်းအကျဉ်း »
မဘသ အဖွဲ့ရဲ့ သာသနာတော် နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘက်မလိုက်ပဲ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှမကြည့်ပဲ အရေးယူဆောင်ရွက်တာကို ဘုရားကျွန်တော်မျိုး အထူးတလည်ထောက်ခံအားပေးပါတယ် ဆရာတော်ဘုရားတို့ …
သာသနာ အရေးမို့ ၀ိုင်းဝန်းရှဲပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပါ ။—————————————————-မဘသ အဖွဲ့ရဲ့ သာသနာတော် နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘက်မလိုက်ပဲ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှမကြည့်ပဲ အရေးယူဆောင်ရွက်တာကို ဘုရားကျွန်တော်မျိုးအထူးတလည်ထောက်ခံအားပေးပါတယ် ဆရာတော်ဘုရားတို့ …
တစ်လက်စတည်း သာသနာတော်ကို အကြီးအကျယ် ဖျက်လိုဖျက်ဆီးနှောင့် ယှက် ခုတုံးလုပ် စော်ကားသူများကိုပါ ထပ်ဆင့်အရေးယူ တရားစွဲဖို့ဘုရားတပည့်တော်မှ ရိုသေလေးမြတ်စွာတိုက်တွန်းလျှောက်ထား အပ်ပါသည် ဆရာတော်ဘုရားတို့ဘုရား …အရှင်ဘုရားတို့ တရားစွဲဆိုသင့်သောအမှုဖြစ်စဉ်များကို ဘုရားတပည့်တော် အစဉ်လိုက် လျှောက်ထားပါရစေ ဘုရား …
၁ ! ရွှေဝါရောင် သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုများကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းသည့် အကြမ်းဖက်မှုမှတ်တမ်း …( မဂ္ဂင်ကျောင်းကို ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုမှတ်တမ်းများအပါအဝင် )
၂ ! ထောင်တွင်း သံဃာတော်တို့အား လူမဆန်စွာ နှိပ်စက်ညှင်းပန်းပုံများ …
၃ ! လက်ပံတောင်းဒေသ သံဃာတော်များအား မီးရှို့ခြင်းနှင့်ဆေကုသမှု မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ …
၄ ! လယ်တီသိမ်ဖျက်ဆီးခံရမှုဖြစ်စဉ် …
၅ ! လယ်သိမ်း ယာသိမ်း မြေသိမ်း ကိစ္စရပ်များတွင်ဒါယကာ ဒါယကာမများရှေ့မှ မေတ္တာရှေ့ထား ရပ်တည်ပေးသောသံဃာတော်များအား အကြမ်းဖက် လိုက်လံရိုက်နှက်မှုများ …
၆ ! နေပြည်တော်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများအား သရက်ခင်းစိုက်ရနိအတွက်ဘူဒိုဇာနဲ့ထိုးပြီး သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်များကိုဖမ်းဝရမိးထုတ် လူဝတ်လဲခိုင်းပြီး ဖမိးဆီထောင်ချခဲ့မှုများ …
၇ ! မဟာသန္တိသုခကျောင်းအား ရဲအဖွဲ့မှအတင်းအဓမ္မ ဝင်ရောက်စီးနင်းမှု …
အစရှိသည့် အမှုကိစ္စများတွင် အဓိက တာဝန်ရှိသူများအားသာသနာတော်ကို စော်ကားဖျက်လိုဖျက်ဆီးလှုပ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုတော်မူကြပါ မဘသ အဖွဲ့မှ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရား …
လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံကိုမဘသအဖွဲ့အား တပည့်တော်တို့မှ အပြည့်အစုံ ပေးအပ်ကူညီပါမယ်လို့ ထပ်ဆင့်လျှောက်ထားအပ်ပါတယ် အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရား …
ဘုရားမျက်နှာတော်ကိုသာ ကြည့်အပ်သော အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရား …မြတ်စွာဘုရားချန်ထားအပ်ခဲ့သော သာသနာတော်ကိုအပြည့်အဝစောင့်ရှောက်သော အားဖြင့် အထက်ပါ အမှုကိစ္စများကိုကျုးလွန်ခဲ့သူ လူ့ငရဲသားများအား နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏အာဏာစက်အကူအညီဖြငိ့ အမြန်ဆုံးဖော်ထုတ် အရေးယူပေးပါရန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အပေါင်းတို့ကိုယ်စား ဘုရားတပည့်တော်မှရိုသေစွာ လျှောက်ထားတင်ပြတိုက်တွန်းအပ်ပါသည် အရှင်သူမြတ်တို့ဘုရား …
၁၉ . ၁၁ . ၂၀၁၄
P.S ဒေတာများအတွက် ကိုပုရစ်ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် …
ဤစာကို Share ပေးခြင်း တစ်ဆင့်ကူးယူတင်ပေးခြင်းသည်သာသနာတော်ကို စော်ကားသူများအား အရေးယူဆောင်ရွက်နေသောမဘသ အဖွဲ့ကြီးအား ဝိုင်းဝန်းကူညီရာရောက်ပါသည် …ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါ …Credit မလိုပါ …
This entry was posted on November 22, 2014 at 12:50 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
One Response to “မဘသ အဖွဲ့ရဲ့ သာသနာတော် နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘက်မလိုက်ပဲ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှမကြည့်ပဲ အရေးယူဆောင်ရွက်တာကို ဘုရားကျွန်တော်မျိုး အထူးတလည်ထောက်ခံအားပေးပါတယ် ဆရာတော်ဘုရားတို့ …”
drkokogyi Says:	November 22, 2014 at 12:53 pm | Reply ဆရာတော်ဝါဇီ နဲ့ ရေစည်လှည်းကိုယ်တော် တို့ က
အဲ့နေရာ ရဖို့ က ခေတ်စနစ်ကြောင့်လေ
ပြစ်မှု ပုဒ် ၂၉၅ ကရော
မန္တလေးကကုလားတွေ နေစရာ စားစရာ မရှိအောင် လုပ်မယ်လို့
ကြိမ်းမောင်း ထားတာ ဗီဒီယိုဖိုင် သက်သေတွေ
နောက် အထူးတရားပွဲအမည်ခံပြီးအထူးကုလားပွဲတွေ ဒါတွေကျ
ဆရာတော်ဝါဇီ မဟန အကြီးအကဲ ဖြစ်ကါစေလို့